Wasiirka Amniga Soomaaliya: Kooxda weeraray madaxtooyada waa la laayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Amniga Soomaaliya: Kooxda weeraray madaxtooyada waa la laayey
21st February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka amniga qaranka Soomaaliya C/kariim Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay weerar maanta salaaddii Jimcaha lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya, kaasoo isugu jiray qaraxyo iyo is-rasaaseyn.
Wasiir Guuleed ayaa sheegay in koox hubeysan ay weerar qaraxyo iyo rasaas isugu jira ku qaadeen madaxtooyada Soomaaliya dhanka xiga degmada Boondheere, wuxuuna xusay in kooxdii weerarka soo qaaday ciidamadu si adag uga hortageen, islamarkaana amaanku haatan sugan yahay.
Wuxuu sidoo kale sheegay wasiir Guuleed in kooxdii weerarka soo qaaday laga dhigay wax la dilay iyo wax la dhaawacay sida uu yiri, isagoo dadka kala hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya.
“Koox ayaa madaxtooyada maanta kazoo weeraray dhanka degmada Boondheere, waxaana si adag uga hortegay ciidamada amaanka, waxaana laga dhigay wax la dilay iyo wax la dhaawacay” ayuu yiri wasiir Guuleed,
Wasiirka ayaa sheegay inuusan jirin mas’uul sare oo ka tirsan dowladda oo ku dhintay ama ku dhaawacmay weerarkaas, wuxuuse xusay iney ku waxyeeloobeen askar iyo saraakiil, isagoo tilmaamay in faahfaafhinta ay gadaal kazoo gudbin doonaan.
Ciidamada ayaa la sheegay iney haatan baarayaan xaafado ka mid ah degmada Boondheere oo ah degmada uu xigo albaabka madaxtooyada ee la weeraray.
Koox hubeysan oo sida loo badinayo ka tirsan Alshabaab ayaa xilligii lagu jiray salaadda Jimcaha weeraray mid ka mid ah baraha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, waxaana dhacay qaraxyo iyo rasaas xoog leh.
Faahfaahin ku saabsan weerarkii Alshabaab ku qaadeen Madaxtooyada Soomaaliya